Midowga Yurub oo boqol kun oo qoys oo Soomaali ah u sahlaya adeeg tamar joogto ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Midowga Yurub oo boqol kun oo qoys oo Soomaali ah u sahlaya adeeg tamar joogto ah
4th March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
War-saxaafadeed: Midowga Yurub (EU) iyo Adventist Relief Agency (ADRA) waxay bilaabeen barnaamij cusub oo 3 sano ah ujeedadiisuna ay tahay isticmaalka iyo faafinta tamarta la cusboonaysiin karo ee Soomaaliya.iyadoo loo maraayo hirgelinta mashruuca “Badalka Tamarta Soomaaliya” (SET), in ka badan 100.000 oo qoys ayaa awoodi doona helitaanka adeegyada tamar joogto ah oo la awoodi karo Somaliland, Puntland iyo Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Isticmaalka tamarta la cusboonaysiiyo waxay wax ka tari doontaan helitaanka tamar nadiif ah. Gaaritaanka yoolkani wuxuu Soomaalida ka caawinayaa inay u dhaqaaqdo yareynta karboonka oo wax ka taraaya isbedelka cimiladda. Helitaanka adeegyada tamarta oo la kordhiyaa waxay keeneysaa fursado dhaqaaluhu ku kobco iyo hilitaanka adeegyadda tamarta.
Arrintani waxaa lagu gaarayaa horumarinta adeega tamarta ee laga dhaliyo qoraxda,iyadoo lagu horumarinayaayo xagga waxqabadka Beeraha, caafimaadka,waxbarashada iyo mashaariicda nal gelinta ee bulshadda. Waxaa kale lagu horumarinayaa hirgelinta girgirayaal yareeyaha isticmaalka dhuxusha oo ay ka ganacsadaan dhalinyaraddu
“Midawga Yurub wuxuu aaminsanyahay in mashruucan cusubi wax ka bedeli doono nolosha dad badan oo soomaali ah. Waxaa sidaa yiri, Michele Cervone d’Urso Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Helintaanka korontadda oo la kordhiyaa waxay wax ka tareysaa helintaanka biyaha, adeegyadda caafimaadka, iyo helintaanka shaqooyin. Waxaanu rajeynaynaa inuu mashruucani keeni doono isbedel iyadoo la balaarinaayo isticmaalka tamarta la cusboonaysiiyo oo dalka oo dhan ah.
“Talaabaddani waxay fududeyn doontaa cirib-tirka saboolnimada ba’an iyo gaajadda,iyadda oo loo marayo bixinta tamar si kor loogu qaado wax soo saarka Beeraha iyo Xoolaha, si loo helo cuntooyin la awoodi karo iyo shaqo abuur. Mashruucani wuxuu qeyb ka yahay dadaalka helitaanka tamar nadiif ah oo wax ka tareysa wax ka qabashada isbedelka cimiladda. Ayuu yiri Luiz Carmago, Agaasimaha ADRA ee Soomaaliya”.
ISIS oo la wareegtay labo ceel shidaal bartamaha Liibiya
Prof. Jawaari oo raba inuu isku xiro baarlamaanada Soomaaliya iyo Jarmalka (Sawirro)